Tech Rutsigiro: Kanganiso Isingazivikanwe yatove nezuva rekuburitsa | Linux Vakapindwa muropa
Tech Rutsigiro: Kanganiso Isingazivikanwe yatove nezuva rekuburitsa
Kana iwe uchifarira mitambo yemavhidhiyo uye chengetedzo, zvirokwazvo zita iri rinotonzwika kunge rakajairika kwauri. Tech Rutsigiro: Kanganiso Isingazivikanwe mutambo wevhidhiyo uyo iwe waunogona kuwana muValve's inozivikanwa online vhidhiyo mutambo wechitoro, ndokuti, chiutsi. Kunyangwe parizvino pasina zita muSpanish, asi unogona kuiwana muChirungu, ChiGerman neChinese, mune iyi link yandasiya, uye ikozvino tine nhau dzekutaura nezvazvo.
Sezvaunoziva, iwo mutambo wevhidhiyo ine nhoroondo yakavakirwa pakuchengetedzwa kwemakomputa uye iyo yakaburitswa yeLinux, MacOS uye Windows. Muparadzi ndiye Iceberg Inopindirana uye mugadziri Dhiragoni yakarara. Iyo Game Demo inowanikwa mahara neLinux rutsigiro pane iyo Steam chitoro sezvandakambotaura mundima yapfuura, uye zvakare kune mamwe masaiti senge Itch uye Gamejolt, asi chakanyanya kukosha kuve Steam. Izvo zvakaziviswa zviri pamutemo kune iyo Kukadzi 27 kubva ku2019, saka isu tatova nezuva repamutemo rekutanga kweTech Support: Kanganiso Isingazivikanwe. Uye iro zuva richauya kune ese mapuratifomu andataura. Ichi chiitiko chakakunda mimwe mibairo chakashoropodzwawo nedzimwe nyanzvi, asi aya ndiwo maonero uye ayo anonyanya kukosha ndeako, kuti iwe ndiwe unofanirwa kusarudza kuti unofarira kana kwete.
Ivo vanoramba vachishanda pakutsigira tekinoroji Quasar Spectrum OS (Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve chirongwa ichi, unogona kuzviita kubva kune imwechete batanidzo) uye mune zvimwe zvigadziriso kukupa iwe yakanaka yekupedzisira chigadzirwa. Iye zvino Kevin Giguère kubva kuDrag Slumber akataura achitsanangura zvimwe zvinhu nezvemutambo uye kuratidza mufaro wake pachigadzirwa chekupedzisira chichauya pazuva rambotaurwa. Chii chauri kumirira, chiedze izvozvi uye kana uchichifarira, shandisa iyo yekupedzisira vhezheni inosvika mwedzi uno!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Tech Rutsigiro: Kanganiso Isingazivikanwe yatove nezuva rekuburitsa
Kunetsekana kwakaonekwa kwakabata Libreoffice uye OpenOffice
Nyora nyowani vhezheni 72 yeGoogle Chrome isina rutsigiro rweChromecast